Indonesia in Focus: Runtii ISIS kooxaha Sunny, sii si aad u hesho taageero ISIS maxay sababtu?
Runtii ISIS kooxaha Sunny, sii si aad u hesho taageero ISIS maxay sababtu?
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (358)
(Qaybta saddex boqol iyo konton siddeed), Depok, West Java, Indonnesia, August 26, 2015, 14:48 pm).
Dalka A inay nafteeda ku baaqday in Dawladda Islaamiga ah ee Ciraaq, Suuriya iyo RC (Islamic khilafada / ISIS) uu weli gacanta ku 1/3 Ciraaq iyo Suuriya.
ISIS dagaalyahanada 25,000 oo dhallinyaro ah (lab iyo dhaddig) ayaa lagu soo waramayaa KMG oo ka yimid 100 dal, oo ay ku jiraan kuwa ka soo UK, USA, Australia, Yurub, iyo Midowgii Soofiyeeti ee hore sida Uzbekistan, Tajikistan iyo Azerbaijan, iyo wadamo badan oo Carab kale.
Si kastaba ha ahaatee, Saudi Arabia ayaa ku eedeeyay ISIS waa khawarij, kuwaas oo ka soo baxay fikirka Islaamka, halka Wikipedia ayaa sheegay in ISIS waa si wadajir ah Sunni iyo Salafi ah.
Taasi waa sababta Isbahaysiga dalalka Carabta hogaaminayo Saudi Arabia taageertaa 80 dal oo kale oo uu hogaaminayo Maraykanka si uu u sii wado dagaalka ka dhanka ah ISIS.
Ilaa iyo hadda ma jirin wax cilmi baaris madax banaan iyo ujeedada, oo dhab ahaan ISIS, in koox soo socda ee Sunni, Salafi ama khawarij, sida lagu eedeeyay ay Saudi Arabia.
Sheekha A Saudi shaaca ka qaaday in uu helay ma sii farcamaan kooxo dadka muslimka ah ee waafaqsan Asaxaabta Ahl Sunnah wal jamaacadda marka laga reebo ka mid ah kuwa raaca As-Salafkii al-Saalax Ahlul Xadiithka.
Inkasta oo kuwii Raacay waxa tusaale ahaan ka mid ah asaxaabta waa kuwa shaqada la sheekeysto (Xadiiska) waa sharciga Shareecada dalah dhab ah oo dhab ah, iyadoo wadada iyo fahamka saaxiib, kanna waa inuu jidka nolosha Ahlul Xadiithka, ma koorsada Ahl-ul-bid'ah iyo Xaawo. Sidaas run iyo ka xoogga leh waxa aan ku tilmaami markii ugu Caddaynaa ay guul qaab-dhexaadiyaan in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii la guusha qofka soo qaaday sunnah sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii iyo Sunnah oo ka mid ah afar badala isaga ka dib.
BBC - England waxaa loo calaamadeeyey sida "jihaadiyiinta internetka keentay," ayaa lagu dilay -drone- weerar ku haleelo milatari lagu sameeyo Syria, sida ay sheegeen saraakiisha Maraykanka.
Xusay, Junaid Hussain, nin dhallinyaro ah oo 21 sano Birmingham ee abid lagu helay kiiska computer jabsiga, waxa uu ahaa "diirada qiimaha sare" ku dhex jira koox wacaya laftiisa Dawladda Islaamiga ah ama ISIS.
Sida laga soo xigtay Maraykanka, dilka ninkii soo galay Suuriya ee 2013 uu ahaa dhabar jab weyn ku ISIS.
Michael McCaul, oo ah guddoomiyaha Guddiga of Homeland Security (Homeland Security Committee), Maraykanka ayaa sheegay in dhimashada Hussain ayaa ahaa "fariin cad."
"Waa in aan sii wado si ay u ilaaliyaan oo u ilaaliyaan awoodda sirdoonka in ay ka hortagaan weerar ay suurtagal tahay, oo waa in aan baabbi'in meesha quduuska ah in kooxaha argagixisada ah.
Horaantii, Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay, "Waxaa na soo gaaraya warar sheegaya in argagixiso ISIS England la rumeysan yahay inay ku dhinteen weerar isbahaysi hawada ee dialkukan Suuriya.
Jihaadiyiinta British kale, Abdul Waheed, ka muwaadin British hore yaa qaraxyo ismiidaamin ah
Hussain, an Hackers computer khabiir, ayaa lagu xukumay lix bilood oo xabsi ah ee 2012 gudbiyay xiriirada online shakhsi Ra'iisul-wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair, oo wuxuu oofin call a been abuur phone inay khadka ka hortagga argagaxisada khad taleefan.
Bishii June, wargeyska The British melapaorkan Sun, Hussain la xiriira ISIS ah ayaa qorshaynaysa in ay fuliyaan weerarro qaraxyo ah lagu sameeyo makiinadaha cadaadis, cadaadis-shooladda, dabaaldega ee Ciidamada Qalabka Sida ee London.
Hussain guursato ah muusikiiste Punk hore, Sally Jones, oo loo yaqaan oo ah xubin ka Sunta Kooxda koox Hackers computer ah.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in weerarkii lagu dilay drone Hussain ka bilaabay meel u dhow magaalada Raqqa.
Dumar badan oo dheeraad ah oo Faransiis ah ayaa lagu beegsaday inuu ku biiro koox wacaya laftiisa Dawladda Islaamiga ah ama ISIS.
Sida ay goob joogayaal ah argagixisada, tirada dumarka ku biiro kooxda ka tirsan in ka badan xad-dhaaf ah ka badan ragga.
"Haween badan ee France yihiin oo xiiso (inuu ku biiro ISIS) sababo bani'aadamnimo," ayuu yiri Jean-Charles Brisard, oo agaasime ka ah Xarunta Falanqaynta Argagixisada ee Paris si ay website wararka Faransiiska, The Local.
"Rajo beegsanayo muwaadiniinta Faransiiska soo bandhigeen dumar iyo carruur badan oo ku xanuunsado. Video iyo sawiro ka (wadnaha) dhaqaaqi doono ee dumarka," ayuu yiri Brisard.
"Waxay (ISIS) isticmaalaya qiyamka West ah in uu ka dhaadhiciyo haweenka in ay iyaga ku biiraan (ISI)," ayuu hadalkiisa raaciyay.
In ka badan 130 haween ayaa ku biiray
Ilaa bishii April ee 2014 ay dowladdu furtay line a phone gaar ah, kaas oo u ogolaanaya muwaadiniinta in ay soo sheegaan dadka ay u badan tahay in ay tagaan Suuriya ama Ciraaq si ay ugu biiraan ISIS.
Tan iyo markaas xukuumaddu heshay wax aan ka yareyn 3,670 wararka.
Data u March 2015 waxaa ka mid ah 261 oo qof ayaa la sheegay in looga shakisan yahay tusi ku biiro ISIS, 135 ka mid ah ay haween yihiin.
Warbixinta ayaa lagu daabacay ayaa sheegay in 1.430 guriga Faransiis sare oo ka mid ah dadka Faransiiska ayaa ku soo biirtay ISIS ee Ciraaq iyo Suuriya.
David Cameron isku dayi doonaa qaar ka mid ah hababka cusub si wax looga qabto xagjirnimada. Waxa uu sheegay in Britain ayaa sidoo kale muddo dheer "bulshada lahaayeen dulqaad".
Ra'iisul wasaaraha Britain samatabbixin doonaa qorshaha counter-xagjirnimada Golaha Amniga Qaranka in lagu dari doonaa khudbad on May 27.
Sharcigan ayaa waxaa ka mid ah qabyo doonaa xeerarka cusub socdaalka, maamulka xiran meesha ururinta oo ka mid ah kooxaha xagjirka ah iyo 'xeerarka ku saabsan xagjirnimada faragelinta'.
Cameron wuxuu odhan doonaa muhiimadda ay soo food saartay fikirka xagjirka-line in "sun ah."
Soo jeedinta markii ugu horaysay loogu talagalay by Theresa Home Xoghayaha May ka hor doorashada British ah.
Qorshaha ayaa waxaa lagu soo horjeeda laga yaabaa in qaar ka mid ah baarlamaanka cusub maxaa yeelay waxa ay xadgudub ku noqon karaa xuquuqda hadalka oo lacag la'aan ah oo ka mid ah dadka reer UK, Wariyaha BBC-da ayaa sheegay in Danny Shaw.
Tallaabooyin ayaa sidoo kale ka mid noqon doona xeerka ganaax ururka xagjirka ah in faafin nacayb meel dadweynaha, kuwaas oo hawlaha ma lagu tilmaamay inay tahay hawlaha urur argagixiso ee ah.
Sida ay faahfaahin ka siiyey May ee shirka xisbiga Conservative ee sanadkii hore, xeerka codsan doonaa haddii wasiirka "macquul ahaan rumaysan" in koox gaar ah loogu tala galay in ay dhiira fidnada diimaha ama jinsi, halis ku yahay dimoqraadiyadda, ama haddii ay jirto baahi degdeg ah si shacabka waxyeello, ama halis ilaalin ah u baahan rabshadaha, xasillooni, dhibaatayn ama falalka kale ee dambiyeed.
Theresa May waa in la qorsheeyo xeerarka muddo dheer, laakiin hore uusan haysan taageerada la-hawlgalayaasha dowladda
Haddii mamnuucidda la ogolaado, kaas oo dib loo eegi doono Maxkamadda Sare ee langsng xubinnimada ama siinta lacag ay hay'adda sida loo arko dambi.
Sharcigu waxa uu ku khalkhal xagjirnimada codsatay in shakhsiyaadka la shuruudaha la mid ah.
Iyadoo qorshayaasha xukuumadda ee, Charity Commission waxaa la siin doonaa kuwa xoogga leh oo dheeraad ah si ay "xalliso hay'adaha in Khayaamina lacag xagjirnimada iyo argagixisada", iyo Hay'adda warbaahinta Ofcom laga yaabaa in tallaabo ka qaadi doonaan saldhigyada in baahin content ku jirto fariin adag-line.
Munaafaqnimo iyo Jaahil
Waxaa la sheegay laga yaabaa in Golaha Ammaanka Qaranka, in xukuumaddu ay awood doonaa noocyo kala duwan oo hay'adaha "Arrinta munaafaqnimo iyo Jaahil ah".
Xukuumaddu waxay awood doonaa noocyo kala duwan oo hay'adaha "Arrinta munaafaqnimo iyo Jaahil ah".
Cameron wuxuu odhan doonaa sharciga cusubi waxa ay noqon doontaa mid ku sii cuslaanayso kuwa faafin aragtiyo adag-line.
"Muddo aad u dheer waxaynu noqon bulshada dulqaad dadban, isagoo dadka deegaanka ilaa iyo inta aad tahay sharciga u hoggaansan ah, waxaanu kuu soo dayn doonaa, '," Cameron ku sheegay qoraal.
Dawladda xisbiga ma sii isticmaali doonaa "hab hore ayaa ku guuldareystay," ayuu hadalkiisa ku daray, isagoo sheegay in UK waa in la soo food etags ee i "fikirka Islaamka xagjirka ah in uu yahay sun ah."
Laba sarkaal ciidamada Ciraaq ayaa wada dilay saddex kalena ay weerar qarax gaari marayay.
Tani waxay dhacdaa goob waqooyi ka xigta caasimadda ah ee Anbar gobolka, Ramadi, halkaas oo ay ciidamada dowladda kala kulmaan koox maleeshiyo ah oo wacaya laftiisa Dawladda Islaamiga ah ama ISIS.
Mid ka mid ah kuwa la dilay uu ahaa General Abdel Rahman Abu Ragheef, oo ah kuxigeenka taliyaha hawlgallada ee gobolka istaraatiijiga ah.
Madaxda horyaalka heerka toban meelood, Safeen Brigadier Abdel Majeed, ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay weerarkii lagu qaaday deegaanka Jerayshi ah, ayaa sheegay in afhayeenka hawlgallada wadajirka ah Brigadier General Yahya Rasool sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo leh.
Waxa uu u sheegay TV-ga Qaranka in ciidamada dhexda baabuurka ay ku jiraan waxyaabaha qarxa iyaga oo lagu beegsanayo, "laakiin qaraxa iyaga ka dhigay galay Shuhadada."
Ma helin qoraal rasmi ah oo xisbiga ka mas'uul ah weerarka.
Militeriga iyo bilayska ah oo taageero ka maleeshiyaadka shiico ah, dagaal Sunni iyo weerarada cirka Mareykanka ay isku dayayaan inay qabsadaan magaalada, oo ku yaalla 100 km galbeed ka xigta magaalada Baqdaad, laakiin horumarinta howlgalkan yahay mid gaabis ah.
Posted by needsjobslowongankerja at 11:05 AM